Fianakaviamben’ny Foloalindahy : Mampirisika ny Filoha hampihatra ny “Etat de nécessité nationale” -
AccueilRaharaham-pirenenaFianakaviamben’ny Foloalindahy : Mampirisika ny Filoha hampihatra ny “Etat de nécessité nationale”
Tsy hamela ny firenena ho latsaka an-katerena na amin’ny fanaovana takalon’aina na ankivy izahay, hoy ny fanambarana nataon’ny Foloalindahy, notarihin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena Béni Xavier Rasolofonirina, teny Ampahibe ary natrehin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny mpitandro filaminana, ny polisim-pirenena, ny zandarimariam-pirenena ary ny Tafika.
Mbola misy tokoa mantsy ireo mpanao politika mihevitra ny hampidi-kizo fanindroany an’i Madagasikara ka mikatsaka ny hisian’ny ra mandriaka sy fandrombaham-pahefana tsy amin’ny alalan’ny fifidianana. Rehefa tsy azo tenenina izy ireo, dia mampirisika ny Filoham-pirenena hampihatra ny andininy faha- 61 anatin’ny Lalàm-panorenana ny Foloalindahy. Io andininy io moa dia miresaka ny fampiharana ny “ Etat d’urgence sy /na Etat de nécessité national sy/na Loi Martiale”. Ny « Etat de nécessité nationale » moa no mifanaraka amin’izao toe-java-misy ankehitriny izao, ka io no hampirisihan’ny Foloalindahy mba hampiharin’ny Filoha.
“ Ho fanajana ny lalàm-panorenana sy ny maha tany tan-dalàna ary ny didy fanapahana navoakan’ny HCC tamin’ny 25 mey teo dia ampirisihana ny rehetra hampandefitra ny hambom-po sy hanandratra avo ny fitiavan-tanindrazana sy ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Tohizo ny fanajana ny fifanarahana politika araka ny fanapahan-kevitra. Raha sanatria ny vava ka ifandroritan’ny mpanao politika ny famakiana ny andininy tsirairay amin’io didy fanapahana io dia ho loza mitatao amin’ity firenentsika izany ka ny fahavalom-pirenena no ahita tombontsoa amin’izany. Mampirisika ireo rehetra izay tompon’antoka amin’izao savorovoro mitady hampikatso ny fiainam-pirenena mba hahatongavanareo amin’ny fitadiavana vahaolana mahomby manaraka ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy mifanandrify amin’ny voalazan’ny Lalàm-panorenana.
Raha tsy tanteraka izany dia hijoro ny fianakaviamben’ny mpitandro filaminana amin’ny maha aro riaka farany azy ireo ho fanajana sy ho fampiharana ny andininy faha – 61 ao amin’ ny Lalàm-panorenana, ary tsy hamela ny firenena ho latsaka an-katerena na amin’ny fanaovana takalon’aina na ankivy ny firenena”, hoy ilay fanambarana.
Azon’ny Filoham-pirenena atao tsara ny mampihatra io « Etat de nécessité nationale » resahin’ny andininy faha -61 ao amin’ny Lalàm-panorenana io, rehefa latsaka an-katerena noho ny fisian’ny mpanao politika mitady hampidi-kizo. Mandritra ny Filankevitry ny minisitra no handraisany ny fanapahan-kevitra aorian’ny fahazoana tolo-kevitra avy amin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena sy ny filohan’ny Antenimieran-doholona, ary ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana. Ny fanambaran’ny Filoham-pirenena an’izany dia manome fahefana manokana ho azy mandritra ny fotoana voafetra araka ny voalazan’ny lalàna fehizoro.